वास्तविक खोज्ने नकली रगतको लागि पकाउनुहोस्
यदि तपाईं एक यथार्थवादी नक्कली रगत चाहानुहुन्छ भने, तपाईं रंगीन पानी भन्दा राम्रो गर्न चाहनु भएको छ! यहाँ एक यथार्थवादी नक्कली रगतको लागि एक नुस्खा हो जुन वास्तविक सम्झौता जस्ता पूल र एक रगतको रङ छ। यो चिपचिपा छ र दाग (जस्तै वास्तविक रगत जस्तै) दाँया हुनेछ, त्यसैले धोने सतहहरु मा यो प्रयोग गर्नुहोस् वा तपाईं सबै खूनी प्राप्त गर्न मन पराउँदैनन्। रगत खाद्य हुन्छ, त्यसैले तपाईं मनपर्छ भने यसलाई पिउन सक्नुहुन्छ।
2 चम्मच सेतो मकई
6 रातो रातो रङ
1 ड्रप नीलो वा हरियो खाना रंग
2 चम्मच कोकोआ पाउडर
यदि तपाईंले कोको मिक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, हट चकलेटको रूपमा, तपाइँ एक पाद रगत पाउनुहुनेछ जुन चिनियाँ भंग गर्न केही पानीको आवश्यकता पर्दछ। Unsweetened कोकोआ धेरै उद्देश्यका लागि एक राम्रो रक्त उत्पादन गर्दछ।
यसलाई निराश पार्नुहोस्
तपाईं केहि सूखे प्याजमा छिड्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई रगत चाहानुहुन्छ भने यसमा घोडा र औंलाहरूको बिट्स समावेश छ। अन्य भान्सा सिजनिंग रूचि पनि जोड्नुहोस्, वा आलु खुर्सानी थप्न विचार गर्नुहोस्। तपाईं रगत भाप गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई पन्चब्रश वा टाइनको बन्द गरेर।
रोबोट गुलाब कसरी बनाउने
चमक र फ्लेमिङ ककटेल
कसरी पिंग पोंग बलहरू संग धुको बम बनाउन
कसरी मासिक मापन ब्यालेन्स प्रयोग गरेर
विज्ञान मेला परियोजना चित्रहरू
लाल गोभी पीएच पेपर कसरी बनाउने?
कसरी घर बनाएको ह्यान्ड हाउजिङ बनाउने
रचनामा कोहेसन को अर्थ
हार्टफोर्ड जीपीए विश्वविद्यालय, एसएट र एक्ट डाटा
के होक एक 'अनुपालन कार' हो?
अचम्मको फुटबलमा के हो?
तस्वीरहरु र तथ्याङ्क संयुक्त राज्य को राष्ट्रपतिहरु को बारे मा
आमाबाबुको प्रश्नहरू मोन्टेसोरीको बारेमा
सती के छ?
याकूबसित कुश्ती गर्ने को हो?
पगन धर्ममा कैल्टिक को परिभाषा
डिसेड द्वारा स्पेस अन्वेषण मिशन
फ्रेस्नो राज्य जीपीए, एसएट र एक्ट डेटा
चीनमा पर्यटन विकास
चरण-दर डेमो: वाटरकोलरसँग ग्लेजहरू चित्रण गर्दछ
पानीको चिसो पोइन्ट के हो?
एक ब्रिनको परिभाषा
किन पेंसिल प्वाइन्ट प्वाइजिङबाट मेटाउन गाह्रो हुन्छ?
Cómo el divorcio को उपयोग को लागि व्यापार को लागि (हरा कार्ड)